Eoropa Slovenia Antontany mpamily
Adiresy: Kopališko nabrežje 5, 6000 Koper - Capodistria, Slovenia;
Phone: +386 5 662 61 00;
Tetikasa mandeha: Mon. - Sat. amin'ny 08:00 hatramin'ny 16:00, Masoandro. 08:00 hatramin'ny 15:00.
Ny Port of Koper no vavahadin-tsambo vaventy vavin'i Slovenia , izay misy ny varotra miasa. Izy io ihany koa no tanjon'ny fizahan-tany lehibe indrindra, satria ny trano sy ny rafitry ny vanim-potoanan'ny Repoblika Venetiana dia voatahiry. Mandeha manerana ny faritry ny seranana ianao, afaka mahita ny porofo mahaliana indrindra momba ny tantara.
Inona no mahaliana momba ny seranan'i Koper?
Ny Port of Koper dia miorina eo anelanelan'ireo seranan-tsambo roa lehibe indrindra ao Eoropa - Trieste sy Rijeka. Niorina tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-11 izy io ary mbola miasa ankehitriny. Ny seranan-tsambo dia manodidina ny 4,737 m², izay misy sombin-tany 23, 7 hatramin'ny 18.7 m ambanin'ny haavony. Misy seranan-tsambo manokana 11 ao amin'ny seranana, saingy misy terminal misy tahiry, izay misy faritra 11.000 m².
Mihamitombo ny seranan-tsambo ao Koper - miparitaka ny taovolo vaovao, ary mihamatotra ny antitra. Mihamaro isan-taona ny fitambaran'ny entana rehetra. Eo amin'ny faritry ny seranana dia misy trano fandefasana entana, toy ny trano fitehirizam-bokatra, fiakarana an-tsambo ary fiara ho an'ny entam-barotra. Amin'ny alàlan'ny seranan-tsambon'i Koper dia mandany ny entana toy ny voankazo avy any Ekoatera, Kolombia, Isiraely sy firenena hafa, fitaovana, kafe, serealy. Tonga eto avy any Afovoany Atsinanana ny sambo, Japon ary Korea. Miasa tsara sy fitaterana an-dranomasina, izay ahafahan'ny mpizaha tany mankany Italie sy Kroasia.
Nanomboka nihanitombo haingana ny seranan-tsambon'i Koper rehefa tonga tao amin'ny Repoblika Venetiana ny faritany. Rehefa nitelina ny faritra ny fanjakan'i Habsburg, dia nomena ny lohatenin'ny seranan-tsambo Aostraliana izy. Ny varotra nahomby dia notontosaina raha tsy nambara fa malalaka ny seranan-tsambo Trieste sy Rijeka.
Taorian'izany dia nihena tsikelikely ny varotra teo amin'ny seranan-tsambon'i Koper , mandra-pahatongan'ny sata sy ny ho aviny ny fanapahan-kevitry ny Memorandum Londresin'ny Fanampiana ifanampiana tamin'ny taona 1954. Nandritra ny vanim-potoanan'ny tsy fahavitrihana, nilatsaka ho fatiantoka ny seranan-tsambo, ka naharitra am-polo taonany no namerenana ny terminal. Tamin'ny 1962, ny fitomboan'i Koper dia 270.000 taonina.
Amin'izao fotoana izao, ny seranan-tsambo dia fifandraisana manan-danja eo amin'ny varotra Slovenia miaraka amin'ny firenen-kafa. Misy boatin-tsambo miaraka amin'ireo mpizahatany tonga eto. Ny seranana dia tsara toerana, akaikin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena roa. Ny seranam-piaramanidina Portorož dia 14 km miala, ary 40 km miala ny seranam-piaramanidin'i Ronchi.
Ny seranan-tsambo ao Koper dia manana teknolojia maoderina, ary ny fanaraha-maso dia tanterahina avy ao amin'ny foibem-pandrefesana fototra, izay mifanaraka amin'ny teknolojia avo lenta. Ireo mpizahatany tonga any Koper, dia tokony handehandeha eny amin'ny seranan-tsambo, hijery ireo sambo sy ny lalam-boavidy izay voalamina mandritra ny vanin-taona mafana.
Azonao atao ny manatratra ny seranan-tsambon'i Koper amin'ny alalan'ny fitateram-bahoaka avy amin'ny bisy na bisy eo an-toerana. Ny halaviran-dalana mankany amin'ny seranana dia 1,5 km eo ho eo.
Benedictine monastery ao St. John
Famaritana ny propolis amin'ny alikaola - fampiharana
Kitapo kely amin'ny bongo lava
22 olana izay ho azon'ny mpanadio rehetra!
Ahoana no nankalazan'ny Krismasy any Belarosia?
Akanjo maotina ho an'ny zatovo
Curd Paska cake
Taiza no niainan'ireo andriamanitra grika?
Fanazaran-tena mifandraika amin'ny hôpitaly ao an-trano
Ny fitsaboana amin'ny areti-maso dia ny fitsaboana tsara indrindra
Ny maso mitrona noho ny reraky ny maso
Mpitsimoka amin'ny hazo
Azo atao ve ny manambady amin'ny taona ho avy?
Fanafody antifunga amin'ny gynécology - labozia
Kvass avy amin'ny vary orza - recipe
Julia Roberts dia voafandrika tsy misy pataloha
Jade vato - toetra mahagaga
Ny volom-bolo ho an'ny volom-borona - masomboly ho an'ny fitomboana sy ny fahasamihafan'ny taovolo ao an-trano